Mitohy ny fahamehana ara-pahasalamana: tsy miova firy ireo fepetra ankapobeny rehetra - ewa.mg
News - Mitohy ny fahamehana ara-pahasalamana: tsy miova firy ireo fepetra ankapobeny rehetra
Tsy miova firy ireo fepetra
ankapobeny amin’izao hamehana ara-pahasalamana faha-14, ho amin’ny
15 andro manaraka izao raha mitaha amin’ny teo aloha. Nambaran’ny
Praiminisitra Ntsay Christian, omaly fa efa an-dalana amin’ny
fifehezana ny valanaretina isika ka nirosoana ny fanakatonana ny
CMC-19 etsy Mahamasina. Najanona ny asan’ny BIS noho ny fihenan’ny
fifindran’ny coronavirus. Na izany aza anefa, tsy maintsy hajaina
hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana. Anisan’izany ny tsy maintsy
hanaovana arotava. ”Mahavoasazy ny tsy fanaovana izany raha
mivoaka ny trano”, hoy izy. Manomboka amin’ny 12 ora alina ka
hatramin’ny 4 ora maraina ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina
ho an’ny faritra Analamanga sy ny any Diana.
Hisokatra ny zotra
Eo amin’ny fitaterana, hisokatra ny
asabotsy 26 septambra izao ny zotra Antananarivo – Antsiranana sy
Antananarivo – Sambava. Tsy maintsy arahina hatrany anefa ireo
fepetra, toy ny fampiasana ny “Manifold” sy ny ara-pahasalamana ary
tsy fanondrotana ny saran-dalana
Hisokatra ny 1 oktobra izao kosa ny
sidina Nosy Be mihazo ny any ivelany. Tahaka izany koa ny
hanokafana ny seranam-piaramanidina hifandraisana amin’ny aty
amin’ny ranomasimbe Indianina amin’ny 29 oktobra izao. Anisan’izany
ny any Antsiranana, Toamasina, Taolagnaro, Toliara.
Eo amin’ny fitaterana
an-dranomasina sy an-dranomamy kosa, misokatra koa izany saingy
mbola voarara ny fampidirana na fitondrana olona avy any
Momba ny kolontsaina sy ny
fialam-boly kosa, tsy mihoatra ny 200 ireo olona ao anatin’ny
toerana. Mikatona amin’ny 11 ora alina. Harahi-maso izy ireny ka
hakatona raha tsy voahaja ny fepetra rehetra.
Efaka misokatra koa ny fiangonana
manerana ny Nosy, saingy tsy maintsy manaja ireo fepetra
Hirosoana ny fifidianana
Eo amin’ny lafiny politika kosa,
nambaran’ny praiminisitra fa tapitra ny fe-potoam-piasan’ny
Antanimierandoholona ka tsy maintsy hirosoana ny fifidianana ny 11
desambra izao.”Manaja ny lalàna velona sy ny lalàmpanorenana
isika”, hoy izy. Notsindriny koa fa tsy mitanila ny
fampandrosoana. Tsy hisy ny faritra sy distrika ho hadino ary efa
nomena vola ireop governora sy ny faritra amin’ny fametrahana
fotodrafitrasa eny ifotony. Anisan’izany ny fanabeazana sy ny
fampianarana ary ny fahasalamana sy ny rano madio fisotro.
L’article Mitohy ny fahamehana ara-pahasalamana: tsy miova firy ireo fepetra ankapobeny rehetra a été récupéré chez Newsmada.
FIATREHANA FAHAVARATRA :: Tsy ahiana intsony ny hisian’ny tondra-drano eny Soavina
Fanarenana maharitra. Afaka hanatanteraka ny famboleny tsy amin’ahiahy amin’izay ny mponina eny Soavina manomboka amin’ity taom-pahavaratra ity. Araka ny nambaran’ny avy ao amin’ny fiadidiana ny tanàna dia tsy ahiana intsony ny hisian’ny tondra-drano eny an-toerana mandritra ny fotoana fiakaran’ny rano mandritra ny fahavaratra. Noho ny fandrosoan’ ny asa fanarenana ny fefiloha izay tanterahina eny an-toerana no tsy hisian’izay intsony, araka ny fantatra. “Efa manodidina ny 45% n’ny asa fanarenana no efa vita ankehitriny. Na miakatra be aza ny rano, tsy ahiana intsony ny mety hahavakisan’ ny fefiloha”, hoy ny Ben’ ny tanànan’i Soavina, Rakotoarisoa Rigobert, omaly. Nanamafy ihany koa ity tompon’andraikitra ity fa any amin’ny taona vaovao vao mety ho vita hatramin’ny farany ny fanarenana ny foto drafitrasa. Vinavinaina ho any amin’ny volana febroary ny fahavitan’ izany araka ny fanazavana hatrany. Raha ny loharanom- baovao dia efa voaloa ara- dalàna ihany koa ny vola tambin’ny trano sy tany anjaran’ireo mponina tsy maintsy noravana, eny an-toerana. Tsiahivina fa manodidina ny arivo metatra toradroa ny fanarenana iny fefiloha iny izay matetika vaky rehefa tonga ny fotoanan’ny rivo-doza ka miakatra ny rano teo aloha. L’article FIATREHANA FAHAVARATRA :: Tsy ahiana intsony ny hisian’ny tondra-drano eny Soavina est apparu en premier sur AoRaha.
Izay manome betsaka sy manome tambiny ihany no tohanan’i dadafara , na Joseph Martin Andriamampionona, izay izy vao manohana kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Mazava tsara mantsy ny nambarany tamin’i Marc Ravalomanana nandritra ny fotoana vitsy nifampiresahan’ny roa tonta, “Ahoana ny fiaraha-miasantsika mianaka rehefa avy eo”. Raha adika tsotsotra ny tiany lazaina dia hoe, inona no toerana omenao ahy sy ny tambiny rehefa lany ianao. Saim-bola tsy mijery ny ho avin’i Madagasikara fa ny tenany ihany, izay no azo hamaritana ny politika manokan’i dadafara. Tsy vitan’ ny manontany fotsiny i Dadafara fa manery tsotr’izao, satria nambarany fa “maika hivory ny birao politikany ka hanapa-kevitra”. Tsy tahotra tsy henatra fa dia zatra ny fiainany eny Mandilaza feno loto sy fisainana hafahafa ary adivarotra, Hany ka na dia raharaham-pirenena aza, mbola entina anaty adivarotra ihany. Soa fa tsy nanaiky lembenan’ny mpanao politika tahaka an-dry Dadafara i Marc Ravalomanana, ka tsy maika ho lany amin’ny fanohanan’ny olona mpivarotra tanindrazana. Fantatr’i Marc Ravalomanana mantsy fa vina ara-tseza ity tadiavin’ i Joseph Martin ity, izay tsy anatin’ny fomba fanehoan’ny kandidà laharana faha-25 velively. Matoa kosa nilaza i Dadafara fa mifanaraka tsara amin’ny vinan’i Andry Rajoelina ny tetikasany, dia efa vita ny adivarotra, ary ho minisitra izany i Dadafara raha sanatria lany eo ilay tohanany. Noho izany dia tokony hanampo ny rehetra, fa hameno paosy ingahy Joseph Martin Andriamampionona, ary tsy hijery ny fahantran’ny Malagasy velively. Iza koa moa izany no mahalala fa tsy niray tsikombakomba tamin’ny dahalo i Dadafara, fony izy minisitry ny fiompiana. Manoloana ity fihetsika tia mivarobarotra ity, dia tokony hisokatra ny fanadihadiana tamin’ny raharaha halatr’omby, fony Dadafara minisitry ny Fiompiana sy ny fambolena. L’article Fanaovana politika maloto : Tratra ny nafenin’i Dadafara est apparu en premier sur .L’article Fanaovana politika maloto : Tratra ny nafenin’i Dadafara a été récupéré chez Triatra.
Fiparitahan’ny valanaretina: 46 ny trangana pesta voamarina
46 ny trangana aretina peste efa voamarina, nanomboka ny 1 aogositra hatramin’ny faran’ny herinandro lasa teo amin’ny distrika 13. Nahatratra 14 ny isan’ny maty hatreto ka ny sivy noho ny pesta miseho amin’ny aretin-tratra ary dimy pesta atoditarimo, araka ny tatitry ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny talata lasa teo. Tamin’ny tranga voamarina, 36 voan’ny pesta atoditarimo, 10 kosa tratran’ny aretina pesta miseho amin’ny tratra. Misy marary iray voan’ny pesta aretin-tratra velona soa aman-tsara, amin’izao fotoana izao rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Ny distrikan’i Tsiroanomandidy no nahitana tranga betsaka indrindra 12 ary ny enina maty avokoa fa ny iray mbola manaraka fitsaboana. Vonjy A.L’article Fiparitahan’ny valanaretina: 46 ny trangana pesta voamarina a été récupéré chez Newsmada.
FIKAMBANANA TSIORINTSOA: Manao ny asa tsy vitan’ny fanjakana
“Matoa betsaka ny fikambanana mpanao asa soa dia misy lesoka avy any amin’ny fitondram-panjakana”, hoy ny fikambanana Tsiorintsoa Atsimondrano. Manao ny asa tsy vitan’ny fanjakana ity fikambanana mpanao asa soa ity. Nambaran’ny filohan’ny fikambanana, Nofy Lalaina Haingoarijaona fa efa be ny asa vita raha tsy hilaza afa-tsy ny fampidirana an-tsekoly ireo zaza nitsaoka an-daharana. Ao anaty ny vinan’ny fikambanana rahateo ny fampiroboroboana ny fanabeazana raha ho an’ny distrikan’Atsimondrano manokana. Tsy adino ihany koa ny fanampiana ny tantsaha. Nilaza ny filoha lefitry ny fikambanana, Michel Joseph fa ny asa sosialy irery ihany no hampandroso an’i Madagasikara ao anatin’ny fotoana fohy. Loha-laharana amin’izany ny fahasalamam-bahoaka. Manarak’izay ny fanomezana asa ho fidiram-bola. Efa nanome asa ho ana fianakaviana maromaro ny fikambanana Tsiorintsoa Atsimondrano toy ny fanaovana asa tana-maro. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny fikambanana, mbola ny ezaky ny mpikambana no hanaovana ny asa soa. 8000 ny isan’ny mpikambana amin’izao fotoana izao. Manohana kandida “Mila tamberina ny vahoaka ary mila olona afaka hihetsika hitondra fampandrosoana”, araka ny fanambaran’ny fikambanana. Rehefa namaky ny vinan’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana ny fikambanana dia resy lahatra fa hanohana azy tsy misy fepetra amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny 19 desambra 2018. Ao anaty ny vinan’ny kandidà ny sosialim-bahoaka ka izany no nahatonga ny fikambanana tapa-kevitra. Mifanojo amin’ny vinan’ny fikambanana izany dia fanantanterahana ny zavatra tadiavin’ny vahoaka. “Izay zavatra tenenin’ny vavanay dia tsy maintsy tanterahinay”, hoy ny filohan’ny fikambanana Nofy Lalaina Haingoarijaona. Mandritra ny fampielezan-kevitra amin’ity fifidianana fihodinana faharoa ity dia hampahafantatra ny olona ny kandida laharana faha-25 sady hanao asa sosialy ny fikambanana Tsiorintsoa Atsimondrano. Lynda A. Cet article FIKAMBANANA TSIORINTSOA: Manao ny asa tsy vitan’ny fanjakana est apparu en premier sur déliremadagascar.